Shirkadda Golis oo 20,000 oo doolar ku wareejisay guddiga abaaraha (Sawiro) – Puntland Chamber of Commerce
Shirkadda Golis oo 20,000 oo doolar ku wareejisay guddiga abaaraha (Sawiro)
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	14th March 2016
Munaasabad ay shirkadda Golis ku wareejinaysay deeq lacageed oo gaaraysa 20,000 oo doolar oo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaanada Puntland ayaa ka dhacday magaalada Bosaso.
Lacagtan ayay shirkadda Golis ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha Puntland oo mudooyinkii dambe ku hawlanaa ku wacyi galinta dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan u gar-gaarida walaalohooda u baahan gacantooda, waxaana lacagtan la qiyaasay in lagu iibin karo 200 oo booyadood oo biyo ah.
Ugu horayn waxaa munaasabadda ka hadlay Hogaanka xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis Faarax Xaaji Mire isagoo sheegay in shirkadda Golis ay mar walba diyaar u tahay inay gacan ka gaysato wax walba oo bulshada wax loogu qabanayo si gaar ahna ay uga damqadeen maanta walaalohooda haraaddan ee abaaruhu saameeyeen taas oo uu xusay inay keentay inay maanta keenaan $20,000.
Maareeyaha Guud ee shirkadda Golis Saciid Aadam Axmed ayaa dhankiisa xusay inay muhiim tahay in wax lagu bixiyo hawlaha noocan ah isagoo intaas ku daray in Golis ay mar walba hormuud u noqnayso u kicida dadka dhibban sidii horayba loogu yaqaanay talaabadanna ay markhaanti ka tahay.
Intaas kadib ayaa masuuliyiinta shirkadda Golis ay gacanta u galiyeen guddiga gurmadka abaaraha jeeg lacageed oo ay ku qorantahay 20,000 waxana markii ay gudoomeen kadib uga mahadceliyay shirkadda Golis talaabada dahabiga ah ee ay qaadday gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Puntland Sheikh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur.
“Shirkadda Golis oo bilaw aad wanaagsan noo samaysay waan u mahadcelinaynaa waxaanna ku boorinaynaa dhamaan ganacsatada iyo shirkadaha kale inay iyaguna ku daydaan Golis oo ay waraabiyaan walaalohooda haraaddan” ayuu yiri Shiekh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur.
Qaar kamid ah Culamaa’udiinka waawayn ee Puntland oo qayb ka ah guddiga gurmadka abaaraha Puntland kuwaas oo ay kamid ahaayeen sheikh Daahir Aw-Cabdi iyo Sheikh Axmed Yuusuf Daad oo madasha ka hadlay ayaa dhankooda u duceeyay shirkadda Golis oo ay ku amaanneen sida mar walba xilka isaga saarto dadka dhibaataysan ee ay lasoo daristo xaaladaha banii’aadanimo.
Deeqda lacageed ee ay maanta gaarsiisay Golis guddiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa noqanaysa deeqdii ugu badnayd waxana la filayaa inay sii socdaan hawlaha ay wadaan guddigu ee ay lacagaha ugu ururinayaan dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Puntland kuwaas oo ilaa hada aan gacan wayn ka helin walaalohooda